बजार घटेसँगै चार ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट, क - कसको घट्यो ?
वैशाख ६, काठमाडौं । नेप्से परिसूचक सोमवार ३७ दशमलव ५८ अंकले घटेको छ ।
सोही कारण चार ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको हो । सबैभन्दा बढी चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ८० प्रतिशतले कमि आएको छ ।
कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार १७३ मा झरेको हो । उक्त कम्पनीले सोमवार चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू.१८ करोड ११ लाख नोक्सानी व्यहोरेको हो ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा कम्पनीका नोक्सानीमा वृद्धि भएको छ । कम्पनी गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. २ करोड १८ लाख ८ हजार नोक्सानीमा गएको थियो । सोही कारण कम्पनीको शेयर खरीदकर्ताभन्दा विक्रेता धेरै भएकाले शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको हो ।
त्यसैगरी दोस्रोमा सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५ दशमलव ५० प्रतिशतले कमि आएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १८९ कायम भएको छ ।
उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य विगत तीन दिनदेखि उच्च दरले वृद्धि भएको थियो । बढेको कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताले प्रोफिट बुक गरेकाले शेयर मूल्य उच्च दरले घटेको हो ।
त्यसैगरी आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव ९५ प्रतिशत र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको शेयर मूल्य ३ दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको छ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार २२० र रिडी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य रू. २१९ कायम भएको छ । ती दुई ओटा कम्पनीको शेयरमा पनि बजार घट्न लागेसँगै क्रेताभन्दा विक्रेता हावी हुँदा घटेको हो ।
स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज
नेप्से परिसूचक ४६.८८ अंक बढेको यो साता कारोबार रकम भने घट्यो [२०७८ जेठ, १]